Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya weerar Al-shabaab ay xalay ku qaaday ciidamo katirsan Puntland – Radio Daljir
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya weerar Al-shabaab ay xalay ku qaaday ciidamo katirsan Puntland
Juunyo 2, 2018 5:17 b 2
Waxaa degan xaaladda deegaanka Bali-khadar oo katirsan dhulka buuralayda ee Galgala ee gobolka Bari, halkaasi oo uu xalay kadhacay dagaal dhexmaray ciidamada Puntland iyo Al-shabaab.
Dagaalka oo saacado socday ayaa waxaa uu yimid kadib weerar ay soo qaadeen ururka Al-shabaab.
War kasoo baxay Al-shabaab ayaa lagu sheegay weerarka xalay inay ku dileen ilaa todobo ka mid ah ciidamada Puntland ee badda PMPF, ayna gaadiid ku gubeen.
Saraakiisha ciidamada badda Puntland ayaa xaqiijiyay dagaalka oo saacado socday inuu ka dhashay khasaare labada dhinac ah.
Al-shabaab ayaa weerarkan gaysatay iyadoo lagu jiro bisha Barakaysan ee Ramadaan oo ay sare u qaadaan weerarada ay gaysanayaan.
Deegaanka oo ah buuralay ayaa xuduud la leh Somaliland, halkaasi oo masuuliyiinta Puntland horay ay ugu eedeeyeen inay taageero ka helaan kooxdan maamulka Somaliland oo muran dhul uu kala dhaxeeyo Puntland.
Darwiish 2 years ago
Mar hadii ciidamada sirdoonka puntland iyo kuwa sirdoonka qaranka ay hayaan magacyada xagjirada, meesha degaanka u ah iyo waxeey qabtaan marka ay bulshada ku dhex jiraan iyo cida soo taagerta waa in la soo qabtaa aduunweynahana loo soo ban dhigaa, khaas ahaan kooxda un monitering group madama ay yihiin koox ka badax banaan siyaasad iyo ineey fuliyaan wax dawlad kale rabto.
Sayidka 2 years ago
Ciidamada argagixis la dirirka ee loo yaqaan (psf) ayaa la shegayas ineey kaga daba tegeen degaanka maraje khaas ahaan toga maraje kana dileen alshabaab 41 askari kana dhaweceen 32 kale arintana waa guul u soo hoyatay gaar ahaan umada somaliyeed iyo beesha caalamka ee argigixisadu dhibta ku hayaan maalin kasta.
Waxaanse isweydinayaa waxa u diiday ciidanka psf iyo ciidanka qaranka ee u tababaran la dagaalanka argigixisada ineey guryooda ku yaal magooliyanka ay ka mid yihiin ceergabo,burco, hargeysa iyo qaar kale oo badan kuwaas oo ku yaala gobolada waqooyi ineey habeenkii ugu dhacaan kana soo qabtaan.
Waxanan ku raacsanahay walaalkey darwiish in marka la soo qabqabto loo soo bandhigo kooxda loo yaqaan un monitering group madama ay yihiin koox siyaasad iyo dawalado shisheeye ka madax banaan ahna koox xaqiiq raadis ah oo ay soo wakisheen urururka qarumaha midoobey khaas ahaan golihiisa amaanka.